rigid printed board, single layer printed board, single-sided printed board(SSB), rigid printed board, copper based board, Copper substrate board. - တရုတ်တင်းတစ်ခုတည်းအလွှာပုံနှိ�တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�ဖွဲ့��Single-တဖက်သတ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�SSB��့, single layer prinကြေးနီအခြေစိုက်ဘုတ်အဖွဲ့siကြေးနီအလွှာဘုတ်အဖွဲ့, rigid printed board, copper based board, Copper substrate board. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
rigid printed board, တစ်ခုတည်းအလွှာပုံနှိ�တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�ဖွဲ့, Single-တဖက်သတ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့(SSB), rigid printed board, ကြေးနီအခြေစိုက်ဘုတ်အဖွဲ့, ကြေးနီအလွှာဘုတ်အဖွဲ့.
ISO ကို 9001 ,
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, ကြေးနီအခြေစိုက်ဘုတ်အဖွဲ့, တင်းကျပ် Single-layer ကိုပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 1, IPC CLASS 2, အထိခိုက်မခံတဲ့အစိမ်းရောင်, ကြေးနီအလွှာနှင့်အတူ, ကောင်းသောအပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို, တည်ငြိမ်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ; အပူလွန်ကျူးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုများတွင်အသုံးပြု; ကြေးနီတူးဖော်၏အသွင်အပြင်, အခက်အခဲ machining, သာမန်ကြေးနီအလွှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကွဲပြားခြားနားသည်, ဘုတ်အဖွဲ့ကြေးနီ plating သတ္တုတွင်းများလုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်. Cu ထူ: 2အောင်, 2.0မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ, အဆိုပါဝိသေသကြေးနီအခြေပြုဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ပစ္စည်း. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဖောက်သည်အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအားများအတွက်အသုံးပြုရန်, DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
4 အလွှာ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့အပြာရောင်အရောင်ဘုတ်အဖွဲ့2အောင်အားလုံးအလွှာ PCB HASL ul PCB 2oz IPC လမ်းညွှန်ချက်များ FR4 2/2/2 / စာရင်းပေါက်
6အလွှာ PCB impedance ထိန်းချုပ်ရေး Multilayer PCB HASL LF PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ
6 မျက်မမြင်ဘုတ်အဖွဲ့ immersive ရွှေနျ Standard IPC2 RoHS နှင့်လက်လှမ်းမီကိုက်ညီထပ်ထား